Codsiga Mashruuca Ilaalinta Biyaha ee SjHZS90-3B Xixiayuan | Shantui
Codsiga Mashruuca Ilaalinta Biyaha ee SjHZS90-3B Xixiayuan
Waqtiga dhismaha: Sebtembar 2020
Goobta codsiga (nooca injineernimada): beeraha, kaymaha iyo ilaalinta biyaha
SjHZS90-3B sibidhka sibidhka waa silo duug ah oo macmiil ah.
Bishii Sebtembar 2020, labada warshad ee shubka ah ee SjHZS090-3B ee Shantui Janeoo ayaa si guul leh u dhammaystiray rakibaadda iyo hawlgelinta waxaana la gaadhsiiyey macaamiisha dhismaha Mashruuca Ilaalinta Biyaha ee Xixiayuan.
Ku tiirsanaanta faa'iidooyinka saxnaanta cabbirka sare iyo hawlgalka ku habboon, warshadda la taaban karo ee shirkadda waxay soo saartaa la taaban karo oo tayo sare leh oo kala duwan si waafaqsan shuruudaha macaamiisha, siinta alaabta ceeriin oo ku filan dhismaha mashaariicda ilaalinta biyaha Xixiayuan iyo soo saarista ilaha awoodda. Tani sidoo kale waa ku-dhaqanka ku-meel-gaadhka ah ee qalabka shirkadda ee mashaariicda waaweyn ee ilaalinta biyaha qaranka ka dib Mashruuca Weecinta Biyaha Dhexe ee Yunnan.
Mashruuca Ilaalinta Biyaha ee Xixiayuan waa mid ka mid ah 172ka mashruuc ee ilaalinta biyaha iyo biyo-gelinta qaranka. Mashruucu wuxuu isku daraa koronto, wuxuuna tixgalinayaa ka faa'iidaysiga guud ee biyaha iyo waraabka. Qulqulka biyaha aan xasilloonayn ee laga soo saaro Kaydka Xiaolangdi waxa loo rogaa qulqul deggan si loo hubiyo socodka joogtada ah ee Wabiga Jaallaha ah. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale asal ahaan meesha ka saaraysaa faa'iido darrada saldhigga ugu sarreysa ee Xiaolangdi Hydropower ee xiirashada webiyada hoose. Saamaynta ayaa door muhiim ah ka ciyaarta deegaanka, ilaalinta deegaanka, iyo biyaha wax soo saarka warshadaha iyo beeraha.